Indlela yokujongana nemilinganiselo ye-coronavirus (ukuvalwa): iingcebiso ezisebenzayo: UMartin Vrijland
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendikhukuliswe yimibuzo malunga nokuqhambuka kwe-coronavirus. Yintoni ekufuneka ndiyenzile? Ndijongene njani nawo onke amanyathelo? Ngawaphi amalungiselelo endiwenzayo ukuze yonke into ivele? Ndineendaba ezimnandi. Iindaba ezimnandi kukuba kuyacaca ukuba abantu abaninzi ngakumbi bayaqonda ukuba idlalwa nge-mass hysteria. Kwincwadi yam ndiyibiza le 'intsholongwane enkulu esenza ukuba sihlale siyinyani'.
Inyani njengoko siyibona ichazwa ikakhulu yimithombo yeendaba kunye nezopolitiko. Abantu abaninzi ngakumbi baqala ukuyibona loo nto.
Ewe kunjalo kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba kwinqanaba lokuqhambuka kwesi sifo, kodwa iskripthi salo Umnyhadala wokwenza umthambo wee-coronavirus yayisele ikho kwaye ukuqhambuka kwe-covid-19 kwakusele kubonisiwe kwiimephu ezintle zehlabathi ngaphambi kokuba kubekho uvavanyo olusemthethweni kwintengiso. Kubonakala ngathi akunakwenzeka ukuba umntu afake ubuxoki okanye usulelo lobuxoki. Okanye ngaba kunokwenzeka? Kwaye ukuba kunjalo, kutheni le nto isihogo besingayenza?
Ke masithathe nje ukuba intsholongwane ikhona. Okwangoku asiqinisekanga nokuba ivele ngokwendalo na okanye mhlawumbi yenzelwe elebhu kwaye ngengozi yasinda okanye yasasazeka njengesixhobo se-bio. Makhe sithathe ukhetho lwesixhobo se-bio (nje kuvavanyo lokucinga). Ukuba bekukho urhulumente okanye iqela lowoyikuko elinokuthi lenze lento, ngekhe ufumanise, kuba alunakulandelwa emva. Esikwaziyo kukuba uBill Gates uthe emva konyaka ka-2017 ukuba ubhubhane olandelayo unokuvela nje kwiscreen sekhompyuter (jonga apha).
Sibona inani elincinci lokosuleleka (nje amawaka ambalwa kumakhulu ezigidi), kodwa ibango kukuba kukho ukukhula okukhulayo emva kwe-coronavirus nokuba ngaphandle kwenani eliphantsi losulelo ekuqaleni, kwiiveki ezimbalwa kamva iba engalawuleki. Ukuba kusoloko kubizwa njalo, indlela yaseDatshi yokuqhambuka okulawulwayo apho iipesenti ezingama-60 zabantu kufuneka bosulelwe ukuze bakhe isikhuseli mlilo yinto emangazayo. UMark Rutte ubize lelo qela lokungazithembi.
Ke into oyaziyo ngelinye ixesha kukufikelela kuqhushumbo olungalawulekiyo kuyakuvumela ukuba ulibazise ukusasazeka kwale ntsholongwane kwaye ungafumani nto ibalulekileyo? Bayasebenza le ndlela e-United Kingdom. Amanye amazwe aya kuvalwa. Kubonakala ngathi le ndlela ingalinganiyo iya kuba sisizathu sokuza nenkqubo engathandekiyo kwilizwe jikelele. Sele silubonile ubizo loorhulumente behlabathi ngokubhekisele kumanyathelo emozulu.
Nabani na ofunde incwadi yam unokuba ufumanise ukuba xa unepolitiki kunye nemithombo yeendaba epokothweni lakho kwaye unethiwekhi enkulu abasebenzi abahlelelekileyo kuluntu (ekunika isiqinisekiso somvuzo), kungcono ukuba kwinqanaba. Kwi-GDR yangaphambili, ngokwamanani asemthethweni, umntu om-1 kwaba-50 wayenjalo Inoffizielle Mitarbeiter. Ngeke siwacingele amathuba okuba oorhulumente bangakwazi ukuzityakatya izinto, besebenzisa iindlela zokusasaza indibaniselwano namajelo eendaba nabantu befumana imali eyongezelelweyo. Esinokufikelela kwisigqibo sokuba oorhulumente bayayifuna le ngxaki.
Kwakuseza kufika. Ndabhala kwakudala phambi kokuba kuqhume le ngxaki eli nqaku apho bendichaze ukuba ubukapitali ibiyindlela efanelekileyo yokubonisa ubukomanisi. Kungenxa yokuba iibhanki eziphambili zishicilele intaba enkulu yemali kangangokuba ibhamu lamatyala (le 'yonke into bubble') yangqineka ingenakuzinza. Ngale mali ishicilelweyo, imali yayibolekiswa kubantu abangena-multimedia ngaphandle kwenzala. Emva koko, iibhanki eziphambili ziphinde zathenga ezo zikhuselo zamatyala (iibhondi). Iinkampani ezinkulu zaye zanikwa imali enkulu yokuthenga abakhuphisana ngokuwa kunye nokukhulisa amaxabiso ezabelo zabo (ngokuthenga izabelo zabo).
Amaxabiso esitokhwe ahlala ephakeme kakhulu, ebebonakala ehamba kakuhle ngokwezoqoqosho. Okubaluleke ngakumbi, nangona kunjalo, kukuba ezi nkampani zinokuba nkulu kwaye zikhulu, ngelixa iinkampani ezingenamalungelo zawela (kuba azifumananga mali yasimahla). Ngokudodobala koqoqosho, oorhulumente ngoku banokuthenga kwaye bathengise amazwe abo. Kwaye ke kungekudala uyakufumana ngokwakho kwinto esiyibiza ngokuba bubukomanisi.
Into yokugqibela oyifunayo kulawulo lobukomanisi ngoosomashishini abazimeleyo. Ufuna ukuba wonke umntu afumane umvuzo osisiseko kwaye adanise ngokucocekileyo kwimithetho ebekiweyo yomthetho. Ifezeke ntoni imeko yaseDatshi (njengomzekelo) kwilinye lawileyo kwiintsuku ezidlulileyo? Wonke umntu usekhaya kwaye uxhomekeke ngokupheleleyo kwinkxaso kurhulumente. Amashumi ezigidi ngezigidi afumaneka ngequbuliso ukunika wonke umntu umvuzo osisiseko. Ngaba ucinga ngobukomanisi? Oko kubonakala ngathi kukho kwicala elifanelekileyo lobukomanisi. Uluvo lobuKomanisi luhle kakhulu ngokwezifundo.
Urhulumente ngoku angazibona zonke iinkalo zobukomanisi kwiiveki ezimbalwa ngenxa yokuqhambuka kwekhoronivirus. Ngaba oko kunuka njengokucwangcisa?
Ndiyayazi. Uya kucinga ukuba abaphathiswa bethu abathandekayo baseDatshi kunye noMarko Rutte wethu ohleli evuya bangaze basebenze kwisicwangciso esinje. Kulungile ke ndiyakubuza: Ndingathetha njani ngesicatshulwa senkosi esilwela urhulumente wobunkunkqele? Ndisenze njani ukuba ndiqikelele?
Siyabazi nobuso obumnyama wobukomanisi. Siyayazi le nto ukusuka kwiSoviet Union yakudala, iGDR, China naseNyakatho Korea. Ngaba uyazi ukuba ngoku uyakubona ubuso obufanayo obumnyama ngeli xesha lokuqhuma kwe-coronavirus? Sibona imikhosi yomkhosi wabantu kumazwe aliqela aseYurophu kunye naseMelika. Sifakwe kwi-Lockdown epheleleyo. Hayi ngoku eNetherlands, kuba i-Netherlands ne-UK kufuneka zibonise ukuba indlela yabo ayisebenzi kakuhle. Ngokwenzekayo, oku kuthetha ukuba ukuvalwa ngokupheleleyo kwe-Netherlands kunye ne-UK kuza kwaye kuya kuba nzima kakhulu kunokuba kunjalo eFrance naseSpain. Siza kubona ubuso obumnyama wobukomanisi kwaye buyathengiswa kuwe njengento eyimfuneko kuba ukholelwa ekubeni kuqhume intsholongwane.
Ndichaza intsholongwane yokwenene kwincwadi yam: 'intsholongwane enkulu esenza ukuba sihlale siyinyaniMsgstr ". Ndiye ndaxela kule ncwadi ukuba kuzakubakho omnye ubhubhane. Intsholongwane yokwenene kukuxhaphaza kwabantu abaninzi kusetyenziswa amajelo osasazo nezopolitiko.
Manyathelo mani esizokuthatha kuqikelelo lwam:
Imikhosi yezomkhosi kunye neyamapolisa
Uxanduva lokulandela "izikhombisi nemiyalelo" (ukulandela ii-odolo)
Unxibelelwano olubonakalayo (olwakho "ukhuseleko", phantsi kwesizathu sokufumana abantu abosulelekileyo okanye abantu abangazigciniyo ii-odolo)
Ukunika ingxelo ngesibophelelo
Ukunqongophala kwemali kunye nemigca kwiindawo zokusebenzela zikarhulumente ezibonelela ngenkxaso
Isithintelo ekusetyenzisweni kwemali kunye noomatshini abangasasebenziyo imali
Ukwalelwa ekhaya okunyanzelekileyo
Kunyanzelekile ukuba kuqinisekiswe ukuvalelwa kwabantu ngaphandle okanye ukuvalelwa entweni kwabo bangengabo abameli babo (abantu abangamameliyo "umkhombandlela" okanye abangenasizathu sivakalayo sokuba sesitratweni)
Ukukhangela abantu abavela kuhlalutyo olukhulu lwedatha kubonisa ukuba banokuba nemvukelo
Uvavanyo lwempilo olusisinyanzelo
App esisinyanzelo ukubeka esweni ukude
In eli nqaku Ndicacisile ulwazi olungasemva kunye nemiphumo yala manyathelo. Ngaba uyazibona izinto ezithile esizaziyo kubukomanisi kwiSoviet Union yakudala, iGDR, North Korea nase China? Ngesi sihlandlo ngoku ithambo elinye libi. Ndiyibiza le "teknoloji yobukomanisi." Obu bubukomanisi apho itekhnoloji idlala indima ebaluleke kakhulu kwaye yonke into inokubekwa esweni ukusuka kumaseva amakhulu embuso. Yiloo nto kanye esele siyayazi evela e-China kwaye ukuba iyakhawuleziswa eYurophu nase-US nge-coronavirus hype.
Kwenzeka ntoni xa ungabambisani? Emva koko uya kuvalelwa kwaye uya kunyanzeliswa kuwe. Yonke imithetho ibekwe kwiminyaka yamuva ukwenza le "nyameko" inyanzelekileyo. Isinyanzeliso sononophelo lokhathalelo lwempilo yengqondo lwenziwa nge-1 kaJanuwari 2020. Ndilumkisile malunga nale minyaka kwaye ndenza nesicelo esisayinwe ngaphezulu kwamaxesha angama-5000. Akukho nto. Ngaphantsi kwekhabethe yaseRutte yangoku, umthetho wawukhawuleziswa.
Yintoni onokuyenza? Ngaba kungangcono ukuyivumela ukuba idlule kuwe ngokugqithileyo kwaye emva koko uphilele kulawulo lobuchwephesha bokwakha, ngethemba lokuba izinto ziya kuphinda zonwabe kwakhona? Okokugqibela, sithanda yonke into elungiselelwe thina. Okokugqibela, sithanda ukufumana umvuzo. Kumnandi nokuba ungaphangeli kwiiveki ezimbalwa ezizayo.
Imbali ifundise ukuba oorhulumente bobuzwilakhe bakhokelela kwingcinezelo epheleleyo. Ke umbuzo ngowokuba ukhetha lula kunye nokugoba okwexeshana elifutshane okanye ucinga ngomphumo wexesha elide.
Kwincwadi yam ndicacisa ukuba yintoni kanye 'i-master script'. Leyo 'script script' yaxelwa kwakudala kwaye yonke into iyaphuma. Ndiza kukubonisa ukhetho olululo ekufuneka uluthathe (iingcebiso ezisebenzayo). Olona khetho lubalulekileyo lunokwenziwa kuphela ukuba ubona wonke umdlalo uphuma ku-A uye ku-Z. Andinokwazi ukuyifaka kwinqaku elinye, kodwa ndiyifake kumaphepha ali-1. Kungekudala kwakhona inguqulelo yesiNgesi. Thatha ngokwakho uze wazi okulindeleyo. Incwadi yam igcina ngeendaba ezimnandi kunye neyona nto ibaluleke kakhulu esebenzayo, kodwa ukuyishwankathela kumgca omnye iya kuba sisiseko. Ke uya kufumana ezona ngcebiso zisebenzayo encwadini. Ungayifunda ngosuku olu-134. Ngokufutshane kodwa kumnandi. Funda apha
Ngokuthengwa kwencwadi yakho uyawuxhasa nomsebenzi wam ukuze ndiqhubeke. Ndingathanda ukukucela ukuba ube lilungu, kuba inkxaso yakho isisigxina kwaye iyimfuneko kakhulu. Kubalulekile kwakhona ukuba wabelane ngamanqaku, ukuze sifike kwisininzi esibalulekileyo. Unokuba yinxalenye yesiphumo esibonakalayo sale ntsholongwane ichasene no-anti-hysterics. Unamandla okuchukumisa iqhosha.
Ubungqina bokubungqina: iiflegi zonyani ziphakanyiswa ukupheliswa kwemali
Ingxoxo yemidiya yoluntu: isixhobo sokwamkela amanyathelo abekwe ecaleni kukarhulumente?
tags: umkhombandlela, imali, Unxibelelwano, imali, coronavirus, Covid-19, kuyenza, eziziimbalasane, imali, imiyalelo, ubungxowankulu, Amazing, amanyathelo, uphawu, rhu lumente, praktische, Rutte, wombuso, inkxaso, iiphakheji zokuxhasa, te, tips, wat
18 Matshi 2020 kwi-14: 19
Wayesazi ntoni uWillem Alexander?
10 Matshi 2020
Inkosi yakhe eNkulu uWillem-Alexander uvula lo mboniso 'KUQHUTYELWE!' NgolwesiThathu ekuseni, nge-15 ka-Epreli. kwi-Rijksmuseum Boerhaave eLeiden. Lo mboniso malunga nokuqhambuka kwezifo ezosulelayo ezifana nesibetho kunye nengqakaqha kunye nendlela ezinokubuphazamisa ngayo ubomi.
18 Matshi 2020 kwi-15: 32
Kwaye kwenzeka njalo abantwana .. Ulawulo lobuzwilakhe kwabancinane.
Landela le miyalelo: Befehl ist befehl!
Ishedyuli 'ye-Covid-19 yabafundi':
19 Matshi 2020 kwi-17: 14
Inqaku loku-1) Isidlo sakusasa sokuqala, emva koko uhlambe kwaye emva koko ukhuphe i-pajamas, kunokuba kunjalo imeko yokuba ulutsha oluphethwe ngengqondo nabazali babo baya kuyenza ngokwenyani le nto.
18 Matshi 2020 kwi-19: 27
Ngoku kusemva kwentsimbi yesi-19.00 kwaye uziva zikhala iintsimbi zecawe. Ngaba iicawe zisekhona kwaye zisavuliwe ngeli xesha? Ngeli lixa? Ngaba yinjongo yokugcina abantu boyike kwifashoni, bayigcine? Ndizothatha impundu, ndiphume ngomnyango ndithethe namanenekazi amabini kwaye bavakalise ukuba kwiiveki ezimbalwa, rhoqo emva kweveki, iintsimbi ziya kulila ngenxa yegciwane le-corona !!!
Bahamba kude kakhulu ne-psyop trance hypnosis yabo.Bangakholelwa kubo ngokwabo.
Ngoku okanye soze siyenze i- "Illuminati". Yima ngoku nditsho kwi "Illuminati" yenza into eqhelekileyo.
Abantu abayonyani ukuba kwenzeka ntoni.
18 Matshi 2020 kwi-19: 51
18 Matshi 2020 kwi-20: 04
Abantu ababeka iliso kwiingxoxo zosasazo loluntu njengomsebenzi wasekhaya egameni likarhulumente. Emva koko ufumana isoftware yokuthetha izinto ezingalunganga ngaye kwaye ukhusele i-ajenda yombuso naphina igama elithi Martin Vrijland livela. Ngokuqinisekileyo ufumana uqeqesho oluncinci lokwenza oko. Ngaba inokwenzeka? Okanye ayisebenzi ngale ndlela? Akunjalo? Nantso enye into eyahlukileyo kwiyelenqe ... yuck
18 Matshi 2020 kwi-21: 17
Manene namanenekazi) kulungile awuzukuphinda uyitsho loo nto) .. Oku AKUKWENZIWA. Ndiyaphinda andiyenzi lento. Ayinakusebenza loo nto, kuba abalungiseleli abenzi
18 Matshi 2020 kwi-21: 27
Ngaba unomdla wokuba njengompolisa akufuneki unxibe imask yobuso. Ngaba bayamelana nentsholongwane okanye bayazi ukuba isoyikiso yentsholongwane ayinantsingiselo?
18 Matshi 2020 kwi-22: 01
Iindaba ze-NOS namhlanje .. "Iivenkile ezinkulu zifuna ukuthintela iintlawulo zemali" oh ndoda icace gca ukuba yeyiphi iskripthi esivelayo ..
18 Matshi 2020 kwi-23: 50
Ndilinde nje unyulo olutsha kwaye uvote iqela elichaseneyo ha ha
Khohlwa, akukho qabane liza kuvota elibandakanywayo kwinkqubo.
Iqela elichasayo kudala libonisana noJohan Cruiyff ukuba umdlalo uhambe njani / ulungile, ulungile webhotile yena 😉 uJohan 😉 wayeyazi kwaye ke angathi: "uyayibona kuphela xa uyibona"
18 Matshi 2020 kwi-23: 53
Umdlalo ojikelezwe nguCroyff omkhulu, ewe !!!
Unetyala, abo bantu bathandekayo uRutte noCruyff, abadlali abakhulu
imarloes wabhala wathi:
19 Matshi 2020 kwi-20: 30
Singakwenza njani ukuba ube mkhulu? Zininzi kakhulu iigusha emhlabeni….
19 Matshi 2020 kwi-00: 25
Ixesha lokuya kubona abantu:
19 Matshi 2020 kwi-00: 30
Amapolisa alungiselela imeko apho kukhethwe khona ukuvalwa ngokupheleleyo eNetherlands, imeko apho uluntu luphela lutshixiwe kwaye abantu kufuneka bahlale ekhaya. Kwimeko enjalo, amapolisa anyanzelisa ukuba kwenziwe lo mthetho ungxamisekileyo kwaye, ukuba kukho imfuneko, "abonise ingalo eyomeleleyo."
19 Matshi 2020 kwi-08: 34
Ukuba ndiqonda ngokuchanekileyo, kusweleke abantu abangama-58, uninzi lwabo lwaludala kwaye sele ligula. Kwaye ngeli nani eliphantsi, uluntu lunkwantye kwaye lushukunyisiwe.
Abantu bayaphaphama. Abasebenzi bakarhulumente bacinga ngaphambi kokuba ulandele imiyalo yomphathi wakho. Buza imibuzo kwaye ugxekwe ngokubalaseleyo kunogxa bakho.
19 Matshi 2020 kwi-17: 19
Kwaye jonga oku ukuba kwenzeke, kuba ungalinda isoyikiso ukuba ukubizwa kwamatyala amatsha angama-2000 kuya kongezwa ngemini. Ke ukoyikiswa yimithombo yeendaba njl. Kwaye emva koko ukutshixelwa eNetherlands kuziswe kangangezihlandlo ezili-10 ngokungqongqo njengoko kunjalo eSpain naseFrance. Emva koko unokufumana imeko apho abantu bazama ukubaleka kwiNetherlands baye kwiNyakatho Korea.
19 Matshi 2020 kwi-10: 51
Ikkususik wabhala wathi:
20 Matshi 2020 kwi-00: 46
UMartin uliqhawe. Indoda enolwazi oluninzi. Ngelishwa, kusekho iigusha ezininzi. Abantu bakholelwa kwimithombo yeendaba ngokungaboni. Oku kuyakuphela kubizwa ngokuba "ziqhwala". Ndiyoyika ukuba ithiyori yakho iya kuba yinto yokwenene. Asinakuvuma nje ukuba kwenzeke le nkwenkwe? Ugonyo luyafuneka. Andicingi ngayo le nto! Incwadi yakho isendleleni. Andinakulinda ukuba ndiyifunde. Fumana ngoku kwaye emva koko uziva nje ngesisu ukusuka (kuyo yonke loo nto ibizwa ngokuba yi-corona eyenzekayo)
« UMphathiswa u-Bijleveld umkhosi ulungele "iindawo ezikuvaleleyo" ezongezelelweyo kunye nokugcina ucwangco kwi-coronavirus kwintlekele, uhlaziyo: inkxaso yamashumi amawaka ezigidi
Ukungena kweSunning kwiCoronavirus Panic nguGqr. Wolfgang Wodarg? »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.330.337
Ilanga op I-Coronavirus: Zivela phi iintsholongwane kwaye zanda njani kwaye zihamba njani?
SalmonInClick op Eyona ndlela isebenzayo yokulwa i-coronavirus ivela eTshayina (ividiyo)